लुम्बिनीमा अस्पताल बनाउदै बौद्ध विश्वविद्यालय – Dainik Lumbini
लुम्बिनीमा अस्पताल बनाउदै बौद्ध विश्वविद्यालय
बुटवल । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले परोपकार कार्य अन्तर्गत लुम्बिनीमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । धुलिखेल अस्पतालसंगको सहकार्यमा अस्पताल बनाउने योजना अघि बढेको हो ।
बौद्ध विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक उन्नयनका साथै परोपकारी लक्ष्यसहितका कार्यमा जोड दिदै आएको छ । धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यमा खडैयामा अस्पताल निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । जनरल अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा शुरु गर्ने योजना विश्वविद्यालयले बनाएको छ ।
‘हामीले पहिलेदेखि नै बनाएको एउटा योजनालाई मूर्तरुप दिन खोजिरहेका छौं, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले भने,–‘अस्पताल निर्माणले लुम्बिनी क्षेत्रका नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुच पुग्नेछ ।’ अस्पताल सञ्चालनपछि स्थानीय समूदाय विश्वविद्यालदयसंग जोडिने र शैक्षिक क्रियाकलापमा समेत सघाउ पुग्ने उनले बताए ।
विश्वविद्यालयले शिक्षक आवास र छात्रावास भएको स्थान खडैयामा अस्पताल बनाउने योजना बनाएको छ । यो जग्गा बाहेक अन्य फराकिलो क्षेत्रको समेत खोजि भइरहेको रजिष्ट्रार आचार्यले बताए ।
अस्पताल निर्माणपछि लुम्बिनी क्षेत्रबासीले उपचारका लागि बाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । अहिले सामान्य उपचारका लागि पनि भैरहवा, बुटवल आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसहित ८ जनासम्म स्वास्थ्यकर्मी रहने परिकल्पना गरिएको छ । यसलाई विस्तार गर्दै ५० बेडसम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।
विश्वविद्यालयको पहलपछि धुलिखेल अस्पतालको प्राविधिक टोलीले प्रस्तावित अस्पताल निर्माण स्थलको अध्ययन गरेको छ । धुलिखेल अस्पतालका डा. बिराजमान कर्माचार्य र दिनेश थापाको टोली र विश्वविद्यालयको टोलीले अस्पताल निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको हो ।
धुलिखेल अस्पतालले बिभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यमा ‘आउटरिच सेन्टर’ चलाउदै आएको छ । बौद्ध विश्वविद्यालयले सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको हो । अस्पतालका डा. कर्माचार्यले लुम्बिनीमा स्वास्थ्य सेवाका लागि सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । ‘हामी बौद्ध विश्वविद्यालयसंग जोडिन पाउदा खुसी छौं, अस्पतालको योजना पूरा हुनेछ, उनले भने ।
अस्पतालको प्राविधिक टोलीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसंग छलफल समेत गरेको छ । सो अवसरमा बोल्दै उपकुलपति प्रा.डा. हृदयरत्न बज्राचार्यले बुद्धले भनेजस्तै विरामीको उपचार गर्नु परोपकारको काम रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालयले परापकारी काम गर्न अग्रसरता दिइरहने बताए ।
विश्वविद्यालयका अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका संयोजक सन्जिव हुमागाईंले आउटरिच स्थापनाले लुम्बिनीको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन सकिने बताए । स्वास्थ्य जनचेतनादेखि उपचारसम्मको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयले लिएर अघि बढ्न सक्ने उनले बताए ।
टोलीमा सहभागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डा. सागर न्यौपानेले लुम्बिनीमा जनरल सेवा सहितको अस्पताल तड्कारो रहेको बताए । ‘यो अस्पताल बनाएपछि खर्च गरेर बुटवल, भैरहवा जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ, उनले भने ।
विश्वविद्यालयले बिभिन्न दाताहरुसंग सहकार्य गरी अस्पतालको स्रोत जुटाइने जनाएको छ । धुलिखेल अस्पतालले प्राविधक सहयोगसहित आर्थिक स्रोतको पहिचानमा समेत सहयोग गर्नेछ । तत्काल सानो स्वरुपमा अस्पताल शुरु गर्ने र त्यसको स्तरबृद्धि गर्दै लगिने योजना रहेको छ ।
सतर्कतापूर्वक कलम चलाउनोस् : महान्यायाधिवक्ता
दाउन्नेमा अवैध कपडा बरामद